Libra Christelle Martinette အားဖြင့် MID-က MONTH UPDATE 15-31 မေလ 2017 အကြားအမြင် TAROT Oracle Rune စာဖတ်ခြင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > Christelle Martinette အားဖြင့် Libra လယ်-က MONTH UPDATE 15-31 မေလ 2017 အကြားအမြင် TAROT Oracle Rune Read
Megan မေလ 14, 2017 ဗီဒီယိုများTagged aries, ဗေဒင်အတတ်ပညာ, ကင်ဆာ, ကဒ်ဖတ်, cartomancy, နေ့စဉ်, Gemini, horoscope, ကျွန်မဖတ်ပါ, ပေါင်ချိန်, ဗျာဒိတ်တော်, အဘိဥာဏ်, စာဖတ်ခြင်း, s ကို ..., scorpio, tarot, Taurus, virgo, အပတ်စဉ်ထုတ်a Comment ချန်ထား Christelle Martinette အားဖြင့် Libra လယ်-က MONTH UPDATE 15-31 မေလ 2017 အကြားအမြင် TAROT Oracle Rune Read အပေါ်
ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ဤအရပ်၌ YouTube ပေါ်မှာအခမဲ့ဖတ် upload, တစ်ဦးချင်းစီနိမိတ် TAROT, LA က Vera SIBILLA Oracle, LENORMAND, အသုံးပြု. AND ငါဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါအဘို့အ Rune ကိုသွန်းလေ၏။
ရဲ့သင်ရုံများကဖြတ်သန်းနှင့်ငါ၏ယူကျု့ချန်နယ်သတိပြုမိနေကြသည်ဆိုပါစို့။ ကြိုဆိုပါတယ်! သင်ဤအကျဉ်းချုပ်ငါဖြစ်၏သူမိတ်ဆက်နှင့်ငါ့အရည်အချင်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါပြုမည်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပေမည်:
သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကစာဖတ်ခြင်းရှာဖွေနေပါသလား? တဦးတည်းအမိန့်မှဤနေရာတွင် Go:
အဘယ်အရာကိုကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကော? ကျောက်သလင်းဖတ်နဲ့တူတစ်ခုခုသို့မဟုတ်ုင် = သင်ဟာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေဤအမိန့်နိုင်သည်
တခါတလေစာဖတ်ဤအမြိုးအစားပဲသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ သငျသညျတခုကြီးမားစွမ်းအင်ပြောင်းကုန်ပြီဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုအလုပ်လိုအပ်ပုံရသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်တော့ Soul ကုထုံးဤကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဟာအကောင်းဆုံးသင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာဘာတွေလုပ်နေလဲ:
ငါသည်ငါ့အသက်ကိုကုထုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားသူတွေကိုအခမဲ့ညှိနှိုင်း (အထက်ပါလင့်များ) ပူဇော်; ငါ့ကိုရေးလိုက်ငါတို့သည်ဖြစ်ပျက်စေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတလေသူကလုံ့လရှိသူရှင်းလင်းခြင်းလိုအပ်ပါတယ်သောငါတို့ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၌တရားမဟုတ်ပါဘူး, သင်ဝန်းရံကြောင်းခိုင်မာတဲ့အနုတ်လက္ခဏာလွှမ်းမိုးမှုရှိပုံကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ခြံမြေရှင်းလင်းသင့်အိမ်များအတွက်သို့မဟုတ်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို key ကိုပါလိမ့်မယ်:
White က Magick ၏ပြုပြင်ခြင်းကိုနားလည်! ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသို့ဝင်ကြလော့။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ဒီတွေ့မြင်:
တစ်ဦးအမြန်ရွေး-ငါ့ကို-up, သို့မဟုတ်အေးဆေးတည်ငြိမ်-ငါ့ကို-Down ဘို့, အလိုရှိသောစွမ်းအင်ပြောင်းကုန်ပြီအစပျိုးရန် reiki session တစ်ခုအမိန့်:
သငျသညျ reiki သင်ယူရန်သင့်လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါ reiki မာစတာ attunements ပူဇော်:
ကျနော်တို့အနေနဲ့ခြုံငုံနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ခံစားနေကြတဲ့အခါ, ဘာမျှအလုပ်မဖြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာကိုချွတ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားပုံရသည်, ငါတို့ Chakra အလုပ်လုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Chakra ထိန်းချုပ်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်ငါသည်သင်တို့၏မြင့်မားသောမိမိကိုယ်ကိုရာခိုင်နှုန်းစီ Chakra မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းနှင့်စွမ်းအင်ရေချိန်ပြန်လည်ညှိဖို့ရယူသုံးပါ။ နောက်ဆက်တွဲစာဖတ်ခြင်း session တစ်ခုမှာတော့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမညီမမျှကူးကသင်ခံစားခဲ့ရပုံကိုခံစားရပါစေနဲ့သင့်ရဲ့ Chakra စနစ်ကထိန်းညှိပြီးနောက်မျှော်လင့်သောအရာကိုဆွေးနွေးရန် operated ဘယ်လိုနားလည်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြောင့်အမိန့်မှ, ဒီမှာသွားပါ:
သငျသညျအထကျအစည်းအဝေးများတဦးမှတဆင့်လုံ့လရှိသူရှင်းလင်းခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ကြောင့်သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်သင့်အားအစေခံလိမ့်မယ်။ သူတို့က, သငျသညျဖို့သူတို့ကဒီသုံး "ဘာသာစကား", နှင့်မည်သို့သူတို့သည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုရရန်ကြိုးစားနေကြသောအခါနားလည်ရန်တင်ပြပုံကိုလေ့လာပါ။ ဒါဟာစာဖတ်ခြင်းသငျသညျကိုသစ်စာရှိရှိသူတို့ကိုသင်၏အသက်တာ၏ကျန်ဘို့သင့်ကိုလမ်းပြရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်:
နောက်ကျောကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုထိန်းချုပ်သို့အရမလိုချင်တဲ့အလေ့အထများ၏ကိုယျ့ကိုယျကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, obsessive အပြုအမူကနေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းငှါ, NLP, Neurolinguistic Programming ကြိုးစားကြ:
အတိတ်သွားရောက်လိုအပ်နေ? ချက်ချင်းအတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီတစ်သက်တာ, ဒါမှမဟုတ်ဝေးလံသောအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝသက်တမ်းအတွက်, သငျသညျ PLR ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ - ဘဝ Regression အစည်းအဝေးများအတိတ်မှ:
သင်တစ်ဦးကဒ်စာဖတ်သူကိုတစ်အဘိဥာဏ်တစ်ခုအလိုလိုသိသို့မဟုတ်စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုရှိပါတယ်လျှင်သင်အသစ်တစ်ခုကိုဗျာဒိတ်တော်ကုန်းပတ်ဖတ်ရှုသင်ယူဖို့လိုပေမည်။ ငါလုံးလုံး, La Vera Sibilla လို့ခေါ်တဲ့အီတလီဗျာဒိတ်တော်ကုန်းပတ်လောကီသားတို့သည်အဝင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ , La Vera Sibilla: ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ကတ်များကိုဖတ်ရှုဖို့ဘယ်လိုပေါ်မှာလက်မှတ်သင်တန်းကိုပူဇော်ဘဝကသူတို့ကိုမရှိရင်ဘယ်အရာကို Be မလား? သငျသညျဒီမှာတစ်ဦးလျှော့စျေးနှင့်အတူအပြည့်အဝသင်တန်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ module တွေအမိန့်နိုင်သည်
တစ်ခု့ပညတ်စာဖတ်ခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုမူဆက်ဆံ! သင်နှင့်သင့်လက်တွဲဖော်ကဤတိကျသောအချိန်ဇယားထဲမှာဒါသဟဇာတပုံရသည်အဘယ်ကြောင့်အခြေခံအကြောင်းရင်းများနားလည်ပါတယ်။ သင်ဒီမှာဒီအမိန့်နိုင်သည်
ပိုပြီးငါ့ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါ၏အ clients များငါပူဇော်မတူညီသောန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ပြောပါသည်, ဒီမှာကြည့်ယူ:
(အောက်တွင်) Twitter ပေါ်တွင်ငါ့နောက်သို့လိုက်
အဲဒီမှာအခြိနျမှနျမှတိုက်ရိုက်သွားနှင့်ငါအသက်ရှင်သွားရတဲ့အခါသင် Periscope အားဖြင့်အသိပေးပါလိမ့်မည်!